NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် Named ဖီးလ် Kubel
Home » သတင်း » ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် Named ဖီးလ် Kubel
ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် Named ဖီးလ် Kubel
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် archive ကိုဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, tools များနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရပ်ရွာ်ထမ်းဆောင်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့, စက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်ဖီးလ် Kubel အဖွဲ့အစည်းရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
Kubel အဖွဲ့အစည်းရဲ့နေ့-to-နေ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲအဖြစ်မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, နှင့်အစီအစဉ်ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတထောက်ပံ့ခြင်း, HPA စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ Burbank-based ရှိနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
"ဖီးလ်ရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံကသူ့ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဆိုင်များတွင်တစ်ခုခင်းကျင်းများအတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ငါတို့ကိုကြီးထွားကူညီပေးဖို့သူ့ကိုစုံလင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါစေ။ အဆိုပါ HPA "အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Barbara Lang ကပြောပါတယ်," တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးသူကိုအရှိန်အဟုန် set ကူညီပေးပါမည်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကသူ့ကိုရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
USC မှသူ၏ကျောင်းဆင်းပွဲပြီးနောက် Kubel ထုတ်လုပ်မှု-related ရာထူးတစ်ခုအရေအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 2003 ခုနှစ်တွင်သူ HRTV ၏တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်း, မြင်းစီးနှင့်မြင်းပြိုင်ပွဲအကြောင်းအရာ featured တဲ့အမျိုးသားရေးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ Kubel Arcadia, CA. အတွက်စန်တာ Anita ပန်းခြံမှာအဆိုပါစတူဒီယို၏ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံအတွက်ဆာခဲ့ သူကြီးသားအပေါင်းတို့, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏နေ့-to-နေ့ကစစ်ဆင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်အခြေခံပြီး subscription ကိုကိုအပါအဝင် HRTV မှာထုတ်လုပ်မှုနှင့်နည်းပညာကိုအစပျိုးသွား HRTV.com အရာလျင်မြန်စွာဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ Kubel ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစုစုအပြင်, သူ HRTV များအတွက် post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် 10 နှစ်အတွင်း2သူဟာ Emmy အနိုင်ပေးနှင့်3Eclipse ဆုရရှိခဲ့သည့် "ပြန်ကြားရေးအတွင်းပိုင်း" ဟုပြင်းထန်စွာကောင်းချီးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီးနောက်ကွယ်ကဖန်တီးမှုအင်အားသုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
2015 ခုနှစ်, Kubel အဆိုပါ Stronach Group မှအသစ်တစ်ခုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပဏာမခြေလှမ်းအဘို့အဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Stronach ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်အောက်တွင်ဖီးယခုဖောက်သည် wagering အဘို့အထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးရရှိနိုင်ကာစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Multi-မီဒီယာမြင်းပြိုင်ပွဲထုတ်ကုန်ဖြစ်သော XBTV ၏ပစ်လွှတ်ကြီးကြပ်။
"ဒါဟာ HPA ပူးပေါင်းခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ပါပဲ" ဟု Kubel မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ကျနော်တို့ကစားသမားတွေချိတ်ဆက်နှင့်စကားလက်ဆုံဦးဆောင်နေဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏စုဆောင်းအသိပညာနှင့်ဆက်ဆံရေးသုံးစွဲဖို့ရှားပါးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ငါ HPA ၏ရူပါရုံကိုဆက်လက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီသယံဇာတအဖြစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
HPA ဖြစ်ရပ်များနှင့်ရပ်ရွာအဝေးရောက်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်အမျှ "ကျနော်တို့ဖီးလ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း join နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ LA က-based ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရှိသည်ဖို့ဝမ်းသာပီတိနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းလျှင်မြန်စွာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်သကဲ့သို့, HPA ကောငျးစှာသောဤအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ aligned ဆက်လက်အာရုံစိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူအလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်ရောက်ရှိရန်အမြစ် ယူ. စိုက်ပျိုးကြသကဲ့သို့, အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခြေလှမ်းဘို့လက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ HPA ၏ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုအဆင့်မှာဖြစ်ရပ်များ, အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ကျနော်တို့သစ်ကိုရှုထောင့်နှင့်သူသည်အဖွဲ့အစည်းကိုမှငါသက်ရောက်စေမည်အတွေးအခေါ်များကိုမြင်လျှင်ရန်မျှော်လင့်, "ရှေ Hallen, HPA ကသမ္မတကပြောပါတယ်။
Kubel Lang မှသတင်းပို့, Burbank အတွက် HPA ရုံးအခြေစိုက်လိမ့်မည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဟောလိဝုဒ် Professional ကအစည်းအရုံး HPA isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-23
ယခင်: PHABRIX မြောက်အမေရိကဘို့အရောင်း၏ VP အဖြစ်ယောသပ်သည် Roncon ခန့်အပ်